घनश्यामज्यूलाई शुभचिन्तकको पत्र : दलाल पुँजीबाद सिंहदरबारबाट भागोस् !
२o७६ मङ्सिर ७ शनिबार
तस्बीर : रासस
तपाइँ कृषिमन्त्री बनेको खबर सुनेर अचानक रुची नभएको विषयमा पनि एकाएक रुची पलाएर आयो । हुनत नेता सांसद सिंहदरबार पसेपछि देशमा परिवर्तन ल्याउनेभन्दा आफै परिवर्तन भएर बाहिरिएको अहिलेसम्मको इतिहास छ । तर तपाईको बारेमा अझै यो धारणा बनाई हालेको भने छैन ।
तपाइँका केहि विचारोत्तेजक भाषण र लेख पढेकी छु । यस्तो मान्छेलाई किन मन्त्री या प्रधानमन्त्री नबनाएको होला भन्थे ति पढ्दा । अहिले जुनसुकै पृष्ठभूमिबाट भएपनि नेकपाको सरकार बनेको २१ महिनापछि तपाई देशको कृषिमन्त्री बन्नु भएको छ । यो खबरले मेरो मनमा अनेकौ प्रश्न उठ्यो । जुन स्वाभाविक नै थियो ।
विद्यालयको पाठयक्रमदेखि ठुला नेताका भाषणसम्म नेपाल कृषि प्रधान देश भएको कुरा पढ्दै र सुन्दै आएको छु । अहिले हाम्रो अवस्था भारतले प्याजमा प्रतिबन्ध लगाउदा यता प्याजको मुल्य चार गुणा बढेको छ तर खान छोडिएको छैन । भोलिका कर्णधार बालबालिका पाउडर हालेको दुध खान बाध्य छन् तर किसानले उत्पादन गरेको दुध बिक्रि नभएर सडकमा पोख्नुपर्ने अवस्था छ । किसानका उत्पादनको मुल्यको त कुरै नगरौ खेती लगाउदा चाहिने मलखाद कहिल्लै पर्याप्त उपलब्ध भयो भन्ने अहिलेसम्म सुनिएको छैन ।
हाम्रो किचनमा हरेक दिन पाक्ने तरकारीदेखि चामल सबै विदेशी हुदा पनि हाम्रो कृषि प्रधानको च्याप्टर अझै हाम्रा पाठ्यक्रममा छ । तपाइँ सिंहदरबार पुग्दा तपाइको स्वागतमा ल्याएको थुगे फूलदेखि घरको कौसीमा सजिलै फलाउन सकिने खुर्सानी, धनियामा हामि विदेशीप्रति आश्रित भएका छौ शायद तपाइको पनि अवस्था यस्तै हो ।
यी त मोटामोटी विषय हुन जुन म जस्तो सामान्य नागरिकले हरेक दिन महसुस गरेकी छु । अझ तपाइको भाषामा भन्ने हो भने त 'दलाल पुँजीवाद' को असर अहिले हाम्रो किचनदेखि किसानसम्मलाई परेको छ ।
तपाइँ त अहिलेको कृषिमन्त्री र यस अघिको एउटा बौद्धिक नेता । अब तपाइले भन्ने गरेका दलाल पुँजीवादीको दोहो काढ्ने ठाउमा पुग्नु भएको छ । धादिङका किसानले उत्पादन गरेको तरकारी बिच बाटोमा चार ठाउमा बेचिन कहिले देखि रोकिएला ? भारतबाट आइरहेको विषादीयुक्त तरकारी त तपाई मन्त्री भएको दिन नै निर्णय गरेर रोकिन पर्ने होइन र ? अझै पनि ढिला भएको छैन निर्णय गर्न नडराउनु होला ।
तपाइँले कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा तपाईले भनेका दुई वटा शब्द 'लोभ र डर' को प्रसंगले मेरो दिमाग घुम्यो । अत्यन्त साधारण भाषामा तपाइले हाम्रो राजनीतिको मुख्य दुश्मन लोभ र डरमाथि आक्रमण नै गर्नु भयो । तपाइको यो भनाई सुनेपछि मैले मेरो किचन सस्तो हुने र विषादीरहित हुनेसम्मको कल्पना गर्न भ्याए । किसानले दुध सडकमा पोख्नु नपर्ने दिन आएको सम्झे । विदेशी भूमिमा आफ्नो श्रम बेचेर बसेको युवा नेपाल फर्केर किसान बन्ने अठोट गरेको सम्झे ।
हुन त तपाइँ आउदैमा सबै समस्या समाधान हुन नसक्लान तर तपाइँको पृष्ठभुमि र छबिले सिंहदरबारमा कागको भिडमा सेतो बकुल्लो घुसे जस्तो देखिएको छ, जसलाई सबैले 'नोटिस' गरेका छन्, मैले जस्तै ।
हुन त सरकार बनेको २१ महिनामा अनेकौ प्रकरण काण्डले दुई तिहाइको ऐतिहासिक सरकारलाई नै बिटिलो बनाएका छन् । पार्टीको नेताको हैसियतले तपाई पनि सबै प्रकरण-काण्डका साक्षी भएकै हो । तर अहिले ति काण्डहरुलाई नजिकबाट हेर्न सक्ने ठाउमा जानु भएको छ । अब भन्नु होला नजिकबाट हेर्दा कस्तो देखिने रैछ ।
साधारण सांसद भएर भाषण गर्दा र मन्त्रीको कुर्चीबाट दलाल पुँजीवादको चेहेरा कस्तो देखिने रैछ समयक्रममा बताउनु होला नै ।
हुनत यस अघि पनि छोटो समयका लागि मन्त्री बन्नु भएकै हो तर अहिलेको प्रसंग र अवस्था विल्कुल फरक छ । तपाईका अगाडी यति धेरै चुनौती छन् भनेर डर देखाउन चाहन्न किनकी तपाइँ डराउदिन भन्नु भएको छ तर लोभ भने देखाउन चाहन्छु । त्यो लोभ दलाल पुँजीवादीको घेराउमा परेर फागुनको पुनर्गठनमा परेर समायोजनमा बाहिरिनेमा तपाइँ नपर्ने गरि काम गर्नु होला शुभकामना छ ।
अहिले तपाइँलाई मन्त्री बनाउनुमा तपाइ पहिलो रोजाईमा भएर वा सरकारको रेस्क्यु गर्न भनेर अवश्य होइन भन्ने मेरो बुझाइ छ । अहिले तपाइँ मन्त्री बन्नुमा तपाइँले आफ्नै सरकारको धेरै विरोध गर्नु भयो, काम गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो अब आउनुस गरेर देखाउनुस्, हामि कस्तो ठाउ र अवस्थामा बसेका छौ भनेर चुनौती दिन मन्त्री बनाएको मेरो बुझाई छ, म गलत हुनसक्छु ।
त्यसैले तपाइँ लोभी बन्नुस् र कम्तिमा अबोध बालबालिकाले खाने दुधको पाउडर बन्द गरेर किसानलाई गाइभैसी पालन गर्न प्रेरित गर्नुस्, किसानका तरकारी बारीमा डोजर लगाएर भारतीय बन्दाको धन्धा बन्द गराउनुस् । खेत बाझै राखेर खाडीमा श्रम गरेको किसानको छोरालाई देश फर्केर किसान बन्न प्रेरणा दिनुस् । त्यसपछि तपाइले भन्ने गरेको दलाल पुँजीबादले सिंहदरबार आफै छोड्ने छ ।
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार खेलकूद क्षेत्रलाई अघि बढाउन प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । तेह्रौँ दक्षिण एशियाली खेलकूद (साग)मा पदक विजेता खेलाडीका लागि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज आयोजित
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग बालुवाटारमा बुधबार १३औ दक्षिण एशियाली खेलकुद (साग) प्रतियोगितामा एकभन्दा बढी स्वर्ण विजयी गौरिका सिंह, मन्डेकाजी श्रेष्ठ, आयशा शाक्य र सुवास तामाङ । तस्वीर : रोशन सापकोटा/रासस
प्रधानमन्त्रीले सागमा पदक विजेता खेलाडीसँग भेट्दै, विशेष प्याकेज घोषणा हुने
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १३औं दक्षिण एसियाली खेलकूदमा पदक जित्ने खेलाडी आज भेट्ने भएका छन् । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाका अनुसार बुधबार दिउँसो सवाँ २ बजे भेट्ने
तरुण दलले भन्यो-विजेता खेलाडीलाई नगदले सम्मान गर, खेलकुदमन्त्रीलाई बर्खास्त गर
काठमाडौं । प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको युवा संघठन नेपाल तरुण दलले १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग)मा स्वर्ण पदक जित्ने खेलाडीहरुलाई जनही २५ लाख रुपैयाँको दरले सम्मान गर्न सरकारसँग माग गरेको